जुन 19, 2019 जुन 19, 2019 साइन्स इन्फोटेक	13 Comments डा. राम बहादुर बोहरा, पैसा, मन्त्र
लक्ष्मी खुसी पारी पैसा तान्ने मन्त्र ! यो पैसा कस्तो बेइमान हुनेलाई भएको भई नहुनेलाईं खाली हात आखिर किन यस्तो हुन्छ । यसको पछि ठूलो रहस्य छिपेको रहेछ । मैले यो रहस्य जान्न निकै कोसिस गरे र केही हदसम्म सफल पनि हुन पुगे । पैसा कमाउन मानिस जे गर्न पनि तयार हुँदा रहेछन् । तर पैसा अप्ठयारो ठाउँमा हुनाले कमाएर बचत गर्न नसके एक ठाउबाट अर्को ठाउँमा पुग्दो रहेछ । हामीले पैसा जम्मा होस् पैसामा हातमा टिकोस् भन्ने चाहना कसलाई नहोला र आज मैले यसै विषयमा पाठकलाई पैसा आएको आई रहने मुस्लिम मन्त्र पस्कन गइरहेको छु ।
हामी मेहनत गर्छौं तर कमाएको पैसा थोरै-थोरै गरेर बाहिर गएको हुन्छ पत्तै लाग्दैन तर यो विधि अपनाउनुस हजुरलाई पैसाको कमि कहिलै महसुस हुने छैन । जसलाई यो वेकार हो भन्छन् त्यस्ताले यो नगर्नु राम्रो भनेको छ मन्त्र शास्त्रमा । जहाँ विश्वास त्यहाँ फल भनेको छ । हामीले दैनिक पुजा गर्छौं पुजा गर्नुको सवैभन्दा ठूलो रहस्य शायद कसैलाई थाहा नहोला तर मलाई भने थाहा हुने गरेको छ । जीवन सफल होस्, धन पैसाले ढुकुटी कहिल्यै खाली नहोस् भनेर हरेक घरकी लक्ष्मीले माग गरेकाले नै आज पुरूष धनी हुन सफल भएका छन् यो कुरा हरेकले बुझ्न आवश्यक छ ।
पुजा गर्दा पनि हामी कति स्वार्थमा छौं, भगवानलाई प्रसाद दिदै भन्छौं हे लक्ष्मी मलाई धेरै धनसम्पति देउ मलाई । अरू केही चाहना छैन विरामी भए विदेशबाट ल्याएको औषधि भएपनि खाम्ला तर पैसा जति दिनुभएपनि हुन्छ भनेर हामीले पुजा गरेका हुन्छौं । यो मन्त्र मलाई बाबाले दिनुभएको थियो यो मन्त्रलाई शुद्ध भएर विहान केहि नखाई ५०१ पटक कोरा कागतमा लेखेर पैसा राख्ने तिजोरी र पकेटमा राख्नु पकेट र सेफ सधै भरी रहनेछ ।
कसैले सोध्नु होला कामै नगरी पैसा कसरी तिजोरीमा पुग्छ पहिले काम गर्नुस बचत गर्ने बानी बसाल्नुस । लक्ष्मी खुसी भएर तपाईंलाई धनको अभाव कहिल्यै हुनेछैन । काम नगरी पैसा त्यसै फल्दैन काम गर्नुस मेहनत गर्नुस, तपाईले स्वयमलाई परिवर्तन पाउनु हुनेछ । माथि ५०१ पटक लेख्ने कुरा भने तर के लेख्ने भन्ने जिज्ञाषा जागेको होला लेख्ने मन्त्र यस्तो छ आजै सेभ गरेर राख्नु होला है ।
मन्त्र : या मुसब्बिब बल असबाब
यो लेखकको व्यक्तिगत अनुभव र विश्वास हो । कस्तो हुन्छ तपाईले लागू गरेर हेर्नुहोस् ।
← नुहाईधुवाई गरेर मात्र खाना खानुपर्छ भन्ने हिन्दु मान्यताको वैज्ञानिक कारण के ?
टाउको किन दुख्छ ? →
अगस्ट 13, 2019 अगस्ट 13, 2019 साइन्स इन्फोटेक 3
13 thoughts on “लक्ष्मी खुसी पारी पैसा तान्ने मन्त्र”
Pingback:सफलताको तान्त्रिक रहस्य
Pingback:कलियुगमा भगवानको खोजी
Pingback:छोरी घरकी लक्ष्मी
Pingback:के तपाईको हातमा पैसा धेरै समय टिक्दैन, यसो गर्नुहोस् पैसा टिकाउन
Pingback:मानिसले किन दिन्छ पैसालाई महत्व ?
Pingback:मन्त्रद्वारा के रोग ठिक हुन सक्छ ? आजको युगमा मन्त्रमा विश्वास गर्ने कि नगर्ने
Pingback:यस्तो छ मानिसको ठूलो शत्रु आलस्य हटाउने अचूक औषधि, जानी राखौ
Pingback:अनिन्द्राको अचूक औषधि मन्त्रद्वारा लाग्नेछ गहिरो निन्द्रा, जानी राखौ
Pingback:ब्लड प्रेशरबारे बरिष्ट आयुर्वेद डाक्टर राम बहादुर बोहराको महत्वपूर्ण जानकारी र सुझाव
Pingback:गलत कार्यमा लागेको श्रीमानलाई ठिक पार्ने यस्तो छ डा. राम बहादुर बोहराको सुझाव
Pingback:सम्पति देखेको पाइदैन पाइन्छ मात्र लेखेको